WHO ayaa ku dhawaaqday codsi deg -deg ah oo dhan $ 7.7 bilyan si loo joojiyo qalliinnada kala duwan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » WHO ayaa ku dhawaaqday codsi deg -deg ah oo dhan $ 7.7 bilyan si loo joojiyo qalliinnada kala duwan
Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • News • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Kala duwanaanshaha COVID ayaa mar kale isbitaallada ku dhufanaya
Iyada oo la soo sheegay kiisas badan oo COVID-19 ah 5-tii bilood ee ugu horreeyay 2021 marka loo eego sannadka 2020 oo dhan, dunidu wali waxay ku jirtaa marxaladda ba'an ee masiibada-in kasta oo heerarka tallaalka ee sarreeya ay ka jiraan waddamada qaarkood oo dadka ka ilaalinaya cudurrada daran iyo dhimashada.
Codsiga $ 7.7 bilyan ma ahan baahi maaliyadeed oo dheeri ah laakiin waa qeyb ka mid ah miisaaniyadda ACT-Accelerator-ka guud ee 2021, oo si degdeg ah loogu baahan yahay 4-ta bilood ee soo socota si loola dagaallamo noocyada COVID.
Baadhitaan aan ku filnayn iyo heerarka tallaalka oo hooseeya ayaa sii xumaynaysa gudbinta cudurrada iyo nidaamyada caafimaadka maxalliga ah ee xad -dhaafka ah.
Xaaladda hadda jirta ayaa dunida oo dhan ka dhigaysa mid u nugul noocyo kala duwan.
Wadamo badan ayaa la kulma mowjado cusub oo caabuqyo ah-halka dalal badan oo dakhligoodu sarreeyo iyo qaar ka mid ah waddamada dakhligoodu sarreeyo ay hirgeliyeen tallaallo baahsan, oo ay dejiyeen nidaamyo tijaabo oo adag, oo ay daaweyntu si isa soo taraysa u heleen-kuwo badan oo hooseeya iyo kuwo dhexe -Dalalka soo gala waxay la halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen qalabkan muhiimka ah iyadoo ay ugu wacan tahay dhaqaale la’aan iyo sahay. Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) wuxuu ku dhawaaqay in maalgashiga ACT-Accelerator si loogu diyaariyo aaladaha qof walba, meel kasta, ay ka faa'iideysan doonto dhammaan waddammada iyada oo loo marayo jawaab-celin caalami ah oo loo dhan yahay oo la isku-dubbariday.
Helitaanka Dardargelinta Aaladaha COVID-19 (ACT-Accelerator) waa isbahaysi caalami ah oo ka kooban ururo horumariya oo geeya baaritaannada cusub, daaweynta iyo tallaallada loo baahan yahay si loo soo afjaro marxaladda ba'an ee masiibada. Iskaashigan waxaa la aasaasay bilowgii masiibada iyadoo laga jawaabayo baaqii hoggaamiyeyaasha G20 waxaana la bilaabay Abriil 2020 munaasabad ay si wadajir ah u soo qaban qaabiyeen Agaasimaha Guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Madaxweynaha Faransiiska, Madaxweynaha Komishanka Yurub, iyo Bill & Melinda Gates Foundation. Maalgelinta muhiimka ah ee dadaalku waxay ka timaaddaa abaabul aan hore loo arag oo deeq -bixiyeyaal ah, oo ay ku jiraan waddamo, waaxyo gaar loo leeyahay, samafalayaal, iyo la -hawlgalayaal dhinacyo badan leh.
Halka 4 kala duwanaansho walaac oo hadda gacanta ku haya cudurrada faafa, waxaa jira cabsi laga qabo in cusub, oo laga yaabo inay ka sii khatar badan tahay, kala duwanaansho walaac ayaa soo bixi kara.
Iyada oo ay jiraan guulo aad u adag 3dii bilood ee la soo dhaafay oo halis ku jira, ACT-Accelerator ayaa dul dhigtay US $7.7 bilyan rafcaan, Rapid ACT-Accelerator Delta Response (RADAR), si degdeg ah:
Tijaabinta imtixaanka: US $ 2.4 bilyan si loo dejiyo dhammaan waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah waddada loo maro koror toban laab ah oo ah tijaabinta COVID-19 iyo in la hubiyo in dhammaan waddammadu ay gaaraan heerar tijaabo oo lagu qanco. Tani waxay si weyn kor ugu qaadi doontaa fahamka maxalliga ah iyo kan caalamiga ah ee isbeddelka cudurrada faafa iyo kala -duwanaanshaha soo ifbaxaya ee walaaca leh, ogeysiin doona ku -habboonaanta caafimaadka dadweynaha iyo tallaabooyinka bulshada iyo jebinta silsiladaha gudbinta.
Joogso dadaallada R&D si aad uga hormariso fayraska: US $ 1 bilyan oo loogu talagalay R&D socota, oo awood u siineysa qaabeynta suuqa iyo wax soo saarka, kaalmada farsamada iyo jiilka dalabka si loo hubiyo in tijaabooyinka, daaweynta iyo tallaallada ay wali wax ku ool u yihiin kala duwanaanshaha Delta iyo kala duwanaanshaha kale ee soo baxaya, iyo in la heli karo oo la awoodi karo halka loo baahan yahay.
Wax ka qabashada oksijiinta degdegga ah waxay u baahan tahay badbaadinta nolosha: US $ 1.2 bilyan si degdeg ah wax looga qabto oksijiin ba'an ayaa u baahan in la daweeyo dadka aadka u jiran loona xakameeyo kororka dhimashada ee uu sababay kala duwanaanshaha Delta.
Bixinta qalabka: US $ 1.4 bilyan si looga caawiyo waddammada aqoonsiga iyo wax ka qabashada caqabadaha muhiimka u ah hawlgelinta iyo adeegsiga dhammaan aaladaha COVID-19. Maaddaama bixinta tallaallada COVID-19 ay sii kordhayso bilaha soo socda, maalgelin dabacsan ayaa lagama maarmaan u noqon doonta inay gacan ka geysato buuxinta daldaloolada bixinta dhulka.
Ilaali shaqaalaha daryeelka caafimaadka safka hore: US $ 1.7 bilyan si loo siiyo laba milyan oo shaqaale daryeel caafimaad oo muhiim ah PPE-da aasaasiga ah oo ku filan si loo ilaaliyo iyaga inta ay xannaaneynayaan kuwa jiran, looga hortago burburka nidaamyada caafimaadka halkaas oo shaqaalaha caafimaadku ay horeba u yaraayeen oo ay aad u sii kordheen, oo looga hortago faafitaanka COVID-19.
Marka lagu daro rafcaanka US $ 7.7 bilyan, waxaa jira fursad lagu keydin karo bixinta tallaallada iyada oo la adeegsanayo xulashooyinka rubuca afaraad ee 2021 oo loogu talagalay 760 milyan oo qiyaasood oo tallaal ah oo la heli doono badhtamaha 2022 oo ka baxsan qiyaasaha si buuxda loo kabo ee COVAX bixin doonto ilaa dhammaadka Q1 2022. Ballan-qaadyada lagu kaydiyo ikhtiyaaraadka tallaalka rubuc-dhammaadka sannadka si loo gaarsiiyo badhtamaha 2022 ayaa loo samayn karaa Gavi/COVAX, oo qayb ka ah shabakadda hay'adaha ACT-A.
Bixinta kaydka ee 760 milyan oo tallaal tallaal ah iyada oo la adeegsanayo ikhtiyaarrada rubuc -dhammaadka ugu dambeeya ee sannadkan si loo hubiyo inay jirto sahay joogto ah oo la heli karo si loo gaarsiiyo illaa 2022 waxay u baahan tahay raasamaal ku -meelgaar ah. Bixinta 760 milyan oo qiyaasood ayaa ku kici doona US $ 3.8 bilyan oo dheeraad ah.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Agaasimaha Guud ee WHO, ayaa yiri: “US $ 7.7 bilyan ayaa si degdeg ah loogu baahan yahay si loogu maalgeliyo shaqada ACT-Accelerator si wax looga qabto qulqulka Delta oo adduunka loo geliyo waddada lagu joojinayo masiibada. Maalgashigani waa qayb aad u yar oo ka mid ah qaddarrada ay dawladuhu ku bixiyaan wax ka qabashada COVID-19 waxayna ka dhigayaan dareen anshax, dhaqaale iyo faafa. Haddii aan hadda la diyaarin lacagahaas si loo joojiyo gudbinta Delta ee dalalka ugu nugul, waxaan shaki ku jirin inaan dhammaan bixin doonno cawaaqibka sannadka dambe. ”
Carl Bildt, Ergeyga Gaarka ah ee WHO ee ACT-Accelerator, ayaa faallo ka bixiyay: “Soo afjaridda masiibada waxay abuuri doontaa tirilyan oo doollar oo soo laabasho dhaqaale ah iyadoo ay ugu wacan tahay kororka wax soo saarka dhaqaalaha adduunka iyo baahida loo qabo qorshayaasha kicinta dowladda si wax looga qabto dhibaatada caafimaad iyo dhaqaale ee COVID- 19 sababood. Daaqaddii wax -qabadku hadda waa. ”
ACT-Accelerator ayaa dhowaan daabacday Q2 2021 Warbixinta Cusboonaysiinta, kaas oo siiya dulmar guud ee horumarka laga gaaray keenista aaladaha badbaadinta nolosha ee COVID-19 waddamada adduunka, wuxuuna iftiiminayaa dadaallada la sameeyay si loo hubiyo in nidaamyada caafimaad ay awoodaan inay helaan oo ay si buuxda u hagaajiyaan adeegsiga tallaabooyinka ka hortagga COVID-19, inta lagu guda jiro Muddada Abriil-ilaa Juun 2021. Waxay muujineysaa sida maalgashiyada loo sameeyay ACT-Accelerator ay u horseedeen natiijooyin iyo saameyn ku aaddan dagaalka ka dhanka ah COVID-19.
Hadalka adduunka oo kordhay iyo dadaallada cusub ayaa ku celcelinaya lama huraanka si loo gaaro sinnaanta dagaalka ka dhanka ah masiibada. In ka badan 15 bilood, markay ahayd Ogosto 9, 2021, deeq-bixiyeyaashu waxay sare u qaadeen oo bixiyeen US $ 17.8 bilyan oo ah baahiyaha maaliyadeed ee ACT-Accelerator US $ 38.1 bilyan. Deeqsinimadan aan hore loo arag ayaa horseedday dadaalka ugu dhaqsaha badan iyo isku -duwidda taariikhda si loo horumariyo aaladaha lagu ilaalinayo amniga caafimaadka adduunka, iyo in la gaarsiiyo saamaynta halka loogu baahan yahay.
Guulaha laga gaaray dhammaan tiirarka ACT-Accelerator waxaa ka mid ah:
Tiirka Baarista, oo ay iska kaashadeen FIND iyo Sanduuqa Caalamiga ah, oo si dhow ula shaqeynaya UNITAID, UNICEF, WHO iyo in ka badan 30 la-hawlgalayaal caafimaad oo caalami ah si kor loogu qaado helitaanka sinnaanta ee teknolojiyadda baarista COVID-19:
In ka badan 84 milyan oo unugyo iyo antigen -ka baaritaanno deg -deg ah lagu ogaanayo (RDTs) ayaa lagu soo iibiyay Daladda Baarista
Wax -soo -saarka gobollaynta ayaa kor loo qaaday iyada oo loo marayo wareejinta teknolojiyadda
In ka badan 70 waddan ayaa taageeray inay ballaariyaan kaabayaasha shaybaarka iyo inay sare u qaadaan tijaabooyinka.
Tiirka daweynta, oo ay wadajir u soo qabanqaabiyeen Wellcome, Unitaid, oo ay taageereen WHO, UNICEF iyo Sanduuqa Caalamiga ah ayaa leh:
Waxay soo iibisay dawooyin qiimihiisu yahay $ 37 milyan oo ay ku jiraan 3 milyan oo qiyaasood oo dexamethasone ah, iyo $ 316 milyan oo sahayda oksijiinta ah.
Aqoonsiga la taageeray ee daaweynta ugu horreysa ee badbaadinta nolosha ee COVID-19-dexamethasone-waxayna bixisay tilmaamo caalami ah oo ku saabsan isticmaalkeeda.
Hawl-wadeenka Gurmadka Degdegga ah ee COVID-19 ayaa la hawlgeliyay si loo qiimeeyo waxna looga qabto kororka COVID-19 ee baahida loo qabo in la yareeyo dhimashada laga hortagi karo. Tiirka ayaa sidoo kale heshiis u ahaa alaab-qeybiyeyaasha ugu weyn ee oksijiinta caafimaadka-Air Liquide iyo Linde-si ay ula kaashadaan wada-hawlgalayaasha ACT-Accelerator si loo kordhiyo helitaanka oksijiinta ee waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa hooseeya. Baahida caalamiga ah ee oksijiin caafimaad ayaa hadda ka badan laba iyo toban jeer ka weyn intii ka horraysay masiibada.
Laga soo bilaabo bilowgii masiibada ilaa Luulyo 1, 2021, in ka badan US $ 97 milyan oo ah sahayda oksijiinta (2.7 milyan oo shay) ayaa loo diray waddamada.
Intaa waxaa sii dheer, rubucii la soo dhaafay, US $ 219 milyan ayaa la guddoonsiiyay waddammada soo iibinta sahayda oksijiinta, oo ay ku jiraan uruurinta oksijiinta iyo dhirta cusub ee oksijiinta dadweynaha, iyada oo loo sii marinayo Mashruuca Waxqabadka Sanduuqa Caalamiga ah ee COVID-19.
COVAX, tiirka Tallaallada, waxaa wada qabta Isbahaysiga U-diyaargarowga Aafooyinka (CEPI), Gavi, Isbahaysiga Tallaalka iyo Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO)-oo la kaashanaya UNICEF oo ah lamaanaha hirgelinta muhiimka ah, iyo kuwa sameeya tallaalka, ururada bulshada rayidka ah, iyo Bangiga Adduunku wuxuu leeyahay:
Waxay dardar gelisay cilmi -baarista iyo kobcinta faylalka tacliimeed ee 11 murashax tallaal oo ku baahsan 4 aaladood oo teknolojiyad ah.
Isugeyn 186.2 milyan oo tallaal ah ayaa loo diray 138 dal iyo dhaqaalo (laga bilaabo 5 Ogosto 2021). Kuwaas, 137.5 milyan oo qiyaasood ayaa loo diray 84 waddan oo AMC iyo dhaqaalahoodaba ah. Waxaa la filayaa in wadar ahaan 1.9 bilyan oo qiyaasood loo heli doono shixnad dhammaadka 2021. Kuwaas, ka -qaybgalayaasha AMC waxaa la filayaa inay helaan qiyaastii 1.5 bilyan oo qiyaasood, oo ay ku jiraan qiyaaso lagu deeqay, oo u dhiganta qiyaastii 23% caymiska dadweynaha (marka laga reebo Hindiya) .
Waxaa la asaasay Guddi -hawleed Wax -soo -saar si loo aqoonsado loona xalliyo arrimaha wax -soo -saarka oo carqaladeeya helidda tallaallada si siman iyada oo loo marayo COVAX. Taskforce-ku wuxuu si degdeg ah wax uga qabanayaa caqabadaha muddada gaaban iyo caqabadaha jira wuxuuna la shaqeynayaa iskaashatada Koonfur Afrika si loo wareejiyo tiknolojiyadda loona sameeyo xarun soo saarista tallaalka gobolka, si loo hubiyo amniga caafimaadka gobolka ee muddada-dheer.
Iskuxiraha Nidaamyada Caafimaadka, oo ay iska kaashadeen Sanduuqa Caalamiga ah, WHO iyo Bangiga Adduunka ayaa leh:
Dhammaadkii Abriil, wuxuu soo iibsaday PPE qiimihiisu ka badan yahay $ 500 milyan, qiimayn diyaar-garowga waddanka ee diyaarinta tallaallada COVID-19 in ka badan 140 waddan (oo ay si wadajir ah u wadaan Bangiga Adduunka, GFF, Gavi, Sanduuqa Caalamiga ah, UNICEF iyo WHO), iyo diiwaangelinta carqaladeynta ilaa 90% nidaamyada iyo adeegyada caafimaadka iyada oo loo marayo sahannada garaaca wadnaha ee in ka badan 100 dal.
Waxa la qabtay aragtiyo u gaar ah waddanka oo ku saabsan caqabadaha iyo caqabadaha la xiriira nidaamyada caafimaad ee socda waxayna soo saareen tilmaamo caalami ah iyo tababarro dhinacyo badan oo nidaamyada caafimaadka ah ee muhiimka ah.
Waxay gacan ka geysatay yareynta qiimayaasha PPE, iyadoo la gaarsiiyey 90% dhimista ugu sarreysa maaskaro caafimaad iyo N95/FFP2. Sanduuqa Caalamiga ah labadaba, iyada oo loo marayo Mashruuca Waxqabadka COVID-19 (C19RM), iyo Xarunta Maalgelinta Caalamiga ah, iyada oo loo sii marayo Adeegyada Caafimaadka Aasaasiga ah ee COVID-19, ayaa deeq lacageed siisay waddammada si ay u iibsadaan PPE, u qaybiyaan dawooyinka iyo tababbarka shaqaalaha caafimaadka bulshada ee tallaalka tallaalka xoojinta jawaabta qaran ee COVID-19.
Kaydka PPE-da oo ay UNICEF hor-dhigtay boosaska bakhaarrada ku yaal Copenhagen, Dubai, Panama iyo Shanghai ayaa isla markiiba la heli karaa si loo gaarsiiyo dalalka u baahan, iyadoo ku xiran helitaanka maaliyad.